Jurgen Klopp oo xaalada ku sii xumeeyay Sergio Ramos kahor inta uusan furmin xili ciyaareedka cusub – Gool FM
Jurgen Klopp oo xaalada ku sii xumeeyay Sergio Ramos kahor inta uusan furmin xili ciyaareedka cusub
(Liverpool) 28 Luulyo 2018. Macalinka kooxda reer England ee Liverpool Jurgen Klopp ayaa dabka kusii shiday kabtanka Real Madrid ee Sergio Ramos, kadib markii uu si xun u dhaqmay kulankii Real Madrid ee Champions League xilli ciyaareedkii hore.
Jurgen Klopp ayaa wuxuu wali diidan yahay guuldaradii ay kala kulmeen kooxda Real Madrid ee ahayd 3-1 inkastoo ay kasoo wareegatay mudo dhan laba bilood.
Macalinka reer Germany ayaa wali aaminsan in Sergio Ramos uu waxyeelo ugu geestay kulankii finalka Champions League xidigihiisa ugu muhiimsanaa kulanka ee Mohamed Salah iyo Loris Karius.
“Hadii aad aan ku laabto xasuusta, isla markaana aadan ahayn taageere Real Madrid, waxaad ogaan doontaa inuu ahaa mid naxariis daran isla markaana ah xayawaan”.
“Uma maleynayo in wax sidaas oo kale ah ay dhici doonto markale, waxyeeleenta labada xidig ka tirsan kooxdeena ee Mohamed Salah iyo Karius waa taariikhda ciyaarta”.
“Dunida oo dhan waxay aaminsan tahay in ereyga ‘isticmaalka hubka oo dhan si loo guuleysto, laakiin aniga ma aaminsani, finalkii sanadkii hore, wuxuu mas’uul ka ahaa in ciyaarta laga ceyriyo Juan Cuadrado, qofna lama hadlin”.
“Waxaan ku daawaday isla garsoorka isagoo maamulaya laba kulan ka tirsanaa koobka aduunka 2018, waxna ma aysan ka dhicin ciyaarta”.
“Hadii xiligaas la adeegsan lahaa aalada VAR ee garsoor caawiyaha, waxaa laga yaabaa inuusan la kulmi lahayn kaarka casaanka”.
Maamulaha Cusub ee Chelsea Maurizio Sarri oo diyaar u ah inuu Kabtanka Kooxda u Magacaabo Eden Hazard
Manchester united oo Beecineysa laba Xiddig si ay usoo xero Galiso Daafaca Leicster City Harry Maguire.